အရွယ်ရောက်သူများပါတီကြိုက်နှစ်သက်သည့် Retro Classic Shades များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံအတွက်တရုတ်လက်ကားနေကာမျက်မှန်များ Baolai
အမျိုးသားများအတွက် Polarized Sunglasses ...
အမျိုးသားများအတွက် Aviator နေကာမျက်မှန် 100% ...
အရွယ်ရောက်သူများပါတီကြိုက်နှစ်သက်သည့် Retro Classic Shades များအတွက်လက်ကားနေကာမျက်မှန်များ
အရွယ်ရောက်သူများပါတီကြိုက်နှစ်သက်သော Retro Classic Shades များ၊ ထုံးစံအတိုင်းရိုက်ထားသောမင်္ဂလာဆောင်ပါတီနေကာမျက်မှန်များအတွက်လက်ကားနေကာမျက်မှန်များ။
4.Lens အကျယ်: 58 မီလီမီတာ
5.Lens အမြင့်: 48mm မီလီမီတာ
၆။ Classic ဒီဇိုင်း - ဒီနွေရာသီနီယွန်နေကာမျက်မှန်ဒီဇိုင်းဖြင့်သင်၏နွေရာသီဝတ်စုံကိုအလွယ်တကူပြီးအောင်ပြီးအောင်ဖြည့်ပါ။ မီးခိုးရောင်မှန်ဘီလူးဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောရောင်စုံဘောင်သည်ခေတ်မီပြီးသောဂန္ထဝင် wayfarer ဘောင်တွင်စတိုင်အနည်းငယ်ထပ်ထည့်ပါလိမ့်မည်။ ဖက်ရှင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းနှင့်ပါတီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ
Item NO ။ 10610-0876
ပစ္စည်း PC ကို
အထုပ် 1 pc / opp အိတ်, 12 pcs / အတွင်းအိတ်
OEM ဝန်ဆောင်မှု ဒီဇိုင်း၊ ထုပ်ပိုးမှု၊ လိုဂိုစသည်တို့ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ။
အခမဲ့နမူနာအချိန် 3-5ရက်
လက်မှတ် အီး, FDA က, BSCI, UV400
စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသောမင်္ဂလာဆောင်ပါတီမှနေကာမျက်မှန်ကိုမင်္ဂလာပွဲကျင်းပသူများအားအသိအမှတ်ပြုလက်ဆောင်အဖြစ်ကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ စုံတွဲများသည်ဤထုံးစံအရနေကာမျက်မှန်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ် ပေး၍ ၎င်းကိုနံပါတ်အမြောက်အများဖြင့်မှာယူနိုင်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေရန်အမြဲရွေးချယ်နိုင်သည်။ အမြောက်အများဝယ်ယူမှုအပေါ်ကြီးမားသောအထူးလျှော့စျေးများပေးထားသည်။ အစိုင်အခဲအရောင်အနက်ရောင်ရာဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်နေကာမျက်မှန် 25 အရောင်များနှင့်အတူမင်္ဂလာဆောင်နေကာမျက်မှန်စမ်းပါ။ ရရှိနိုင်အမျိုးကွဲ option ကို။
.Editable Formats - ဖောက်သည်များက elextronic အလုပ်ဖိုင်များကိုတည်းဖြတ်နိုင်သောပုံစံများဖြင့်ပို့ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်သည်။ EPS PSD AI PDF ကဲ့သို့သောအရာများ
.Coversions -ALL fonts များကို curves / outlines အဖြစ်ပြောင်းရန်လိုသည်
.Color mode -CMYK သည်ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်နှစ်သက်သောအရောင်ဖြစ်သည်
။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု - ကျွန်ုပ်တို့သည် JPEG နှင့် resolution 300 x dpi ထက်သာလွန်သော bitmap ပုံများကိုသာလက်ခံသည်
ရရှိနိုင်အရောင်များ: အနက်ရောင်၊ အဖြူနှင့်အနက်ရောင်၊ အဖြူနှင့်အနက်ရောင်၊ အဖြူနှင့်အနက်ရောင်၊ အပြာနှင့်အနက်ရောင်၊ အပြာနှင့်အပြာ၊ အစိမ်းနှင့်အစိမ်း၊ လိမ္မော်ရောင်နှင့်လိမ္မော်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနက်ရောင်၊ နီယွန်အဝါရောင်နှင့်အတူအနက်ရောင်။
Imprint :ရိယာ: ၂ "X 3/8"
ထုပ်ပိုးခြင်း - 300
ထုတ်လုပ်ချိန် - ၂၅ ရက်
ကျနော်တို့ကဒီနေကာမျက်မှန်တစ်စုံကိုစမ်းသပ်ပြီးသူတို့ကတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းရုံသာမကမျက်လုံးကိုကာကွယ်ပေးတယ်။ မှန်ဘီလူးတွေကတော်တော်မှောင်မိုက်နေတယ် (ဥပမာအားဖြင့်ညမှာမင်းနေကာမျက်မှန်တပ်ထားရပေမယ့်အပြင်ဘက်မှာတော့ပြည့်စုံနေမှာပါ) ။ ပြီးတော့သင့်နားရွက်တွေကိုအဆင်ပြေစွာအနားယူပါ။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုကွေးခြင်းနှင့်ဆန့်ထားတာကြာရှည်ခံဖို့ဆွဲချတယ်၊ သူတို့ကချန်ပီယံတွေလိုကိုင်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုသင်ချန်ခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်မတော်တဆကားထဲကပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်လိုက်ရင်စိတ်မပူပါနဲ့။
1. သင်စက်ရုံလား၊ ကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံတွေရှိတယ် Linhai Zhejiang မှာ!
၂.၂ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် LOGO အကြောင်း။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်သတ္တုအမှတ်တံဆိပ်ကိုဘုရားကျောင်းများ၊ အကြံပြုချက်များနှင့်မှန်ဘီလူးများပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပုံနှိပ်နိုင်သည်။
သင်၏ငွေပေးချေမှုသက်တမ်းမှာအဘယ်နည်း။ 30% သိုက်, ရေကြောင်းမီ 70% ချိန်ခွင်လျှာ။
၄.၄ ။ နမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ ၁ စုံကိုအရင်ဝယ်ပြီးအမှာစာအသေးစားတစ်ခုဝယ်လို့ရမလား။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နမူနာအမှာစာကိုလက်ခံသည်၊ သင်သည်အရည်အသွေးကိုပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးရန်အတွက်နမူနာမှာယူနိုင်သည်။
၅.၅ ။ တစ် ဦး ချင်းစီအဘို့အဘယ်လောက်ကျပါသလဲ စျေးနှုန်းသည်မော်ဒယ်၊ မှန်ဘီလူးအရောင်နှင့်လက်မောင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးသင်ရွေးချယ်သောအရာကိုစာရင်းပြုစုနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
၆.၆ ။ ဒါကမင်းရဲ့ကုမ္ပဏီဆီကပထမဆုံး ၀ ယ်တာပါ၊ ငါ့အတွက်ဘယ်လိုသင်္ဘောပို့ဆောင်မလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့် FedEx, DHL, UPS သို့မဟုတ် TNT ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးသည်။ သင့်မှာ Carrier Account ရှိရင်အဲဒါလည်း OK ပါလိမ့်မယ်။
၇.၇ ။ ကျိုးပဲ့သောပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်ရရှိပါကဘာလုပ်ရမလဲ။ အကယ်၍ သင်သည်ပစ္စည်းကိုကျိုးပဲ့စွာလက်ခံရရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်၍ မကြာမီဓာတ်ပုံရိုက်ပါကသင်၏နောက်အမှာစာထဲတွင်အစားထိုးပါမည်။
US အတွက်ကောင်းကျိုးများ -
1, ကျွန်ုပ်တို့သည် 50pcs ကျော် qty လျှင်သာဝါးမျက်မှန်အပေါ် LOGO လေဆာနိုင်ပါတယ်! ၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအား“ အရည်အသွေးအာမခံ” နှင့်“ အချိန်မှန်အာမခံ” ကိုလက်မှတ်ထိုးနိုင်သည်။ 3, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံခြုံစိတ်ချစွာရောင်းနိုင်သည့် CE, SGS-UV400, FDA လက်မှတ်များကိုကျော်ဖြတ်နိုင်!
ရှေ့သို့ အရွယ်ရောက်သူများပါတီကြိုက်နှစ်သက်သည့် Retro Classic Shades များအတွက်လက်ကားနေကာမျက်မှန်များ
နောက်တစ်ခု: အန္တရာယ်ကင်းသောမျက်မှန်များမျက်မှန်တပ်ကာမျက်မှန်တပ်ဆင်ခြင်း - အကာအကွယ်မျက်မှန် - မြူဆန့်သောမျက်မှန်များသေနတ်ပစ်ခြင်းမျက်မှန်များကိုကြည်လင်သောအမြင်အာရုံ၊ ခြစ်ခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ခြင်းမျက်မှန်တပ်ဆင်ခြင်းအမျိုးသားများအတွက်အမျိုးသမီးများအတွက်ဆေးညွန်းသည့်မျက်မှန်များတပ်ဆင်ထားသည်။
2020 ထုတ်ကုန်အသစ် Custom Lens Outdoor Sports gla ...
Rivet P နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ဖက်ရှင်စားပွဲနေကာမျက်မှန် ... \_ t
ကာတွန်းပုံနှိပ်ပေါ့ပါးမျက်နှာစောင့်တပ် Coverin ...
အရွယ်ရောက်သူများပါတီ Favo အတွက်လက်ကားနေကာမျက်မှန်များ ...
ကလေးသူငယ်များသည်မျက်မှန်ကိုယ်ထည်၊ အပြည့်အဝ Tran ဖြင့်မျက်နှာကြက် ...